गौरीफन्टा नाकाबाट एकैदिन ५०१३ नेपाली भित्रिए : आधा क्वारेन्टाइनमा, आधा गाउँघरमा « MNTVONLINE.COM
गौरीफन्टा नाकाबाट एकैदिन ५०१३ नेपाली भित्रिए : आधा क्वारेन्टाइनमा, आधा गाउँघरमा
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका चार नाकाबाट दुई सातामा २६ हजार नागरिक भित्रिएका छन् । २ जेठ यता कैलाली, कञ्चनपुर, बैतडी र दार्चुलाबाट २६ हजार १५० जना नेपाल आएका हुन् । उनीहरुमध्ये धेरै कैलालीको गौरिफन्टा नामाबाट भित्रिएका छन् ।
कैलालीको गौरिफन्टा नाकाबाट मात्रै १९ हजार ४ सय ८३ जना भित्रिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ । प्रहरी नायव उपरीक्षक दक्ष बस्नेतकाअनुसार मंगलबार एकैदिन यो नाकाबाट ५०१३ जना नेपाल भित्रिएका हुन् ।
कञ्चनपुरको गड्डाचौकी र दोधरा चादँनीबाट ५ हजार ९७० भित्रिएको जिल्लाप्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रवक्ता प्रहरी नायव उपरीक्षक रबिन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । उनले सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाइरहेको पनि जानकारी दिए ।
प्रदेशको पहाडि जिल्लाका सीमा नाकाबाट पनि नागरिक नेपालभित्रिरहेका छन् । ‘दार्चलाको नाका हुँदै ७ गते ३१९जना आएका थिए, त्यसपछि आएनन्’ दार्चुलाका प्रहरी प्रमुख पदमबहादुर बिष्टले भने, ‘आएका सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राखेका छौं ।’
बैतडीकाको झुलाघाट नाकाबाट पनि ३७८ जना आएको प्रहरी प्रमुख डिल्लीनारायण पाण्डेले जानकारी दिएका छन् । ‘हामीले सिमामा पुगेकालाई उद्धार गरिरहेका छौँ’ उनले भने, ‘त्यसपछि कोही आएका छैनन् ।’
प्रदेशका ४ नाकाबाट २६ हजारबढी नेपाल प्रवेश गरेपनि अधिकांशको स्वास्थ्य परीक्षण भएको छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीले आडीटी किटको अभावले भारतबाट आउने अधिकांशको स्वास्थ्य परीक्षण हुन नसकेको स्वीकार गरे । ‘सुरुका केहि दिनमा सीमा क्षेत्रमै आरडीटी परीक्षण गरिएको थियो । अहिले किट नहुँदा सीमामै परीक्षण भएको छैन’ उनले भने ‘स्थानीय तहले अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गराउने भनेपछि हामीले पठाइरहेका छौं ।’
जनकपुरमा युवाले संविधान जलाए !
थप दुई कोरोना संक्रमितको मृत्यु !
सवारी दुर्घटना हुँदा एकको मृत्यु !
प्रश्नोत्तर गर्ने विद्यार्थीहरुको शैक्षिक क्षमतामा नाटकीय रुपमा बृद्धि : अध्यान
अब कुनै पनि नेपालीले भोक–भोकै बस्नु पर्दैनः मुख्यमन्त्री पौडेल